Sidee amfibiyadu u tarmaan, sifooyinka iyo waxa ay yihiin. ? | Ee kalluunka
Amphibians waa xayawaan vertebrate Waxaa lagu gartaa maqaarkooda qaawan, oo aan miisaan lahayn.
Qormadan waxaan ku sharxi doonnaa dhammaan sirta xayawaankan, innagoo ka bilaabayna dhalmada amphibians-ka, Noocyada amphibians-ka jira, tusaalooyinka qaarkood iyo xiisaha kale ee hubaal ah inay waxtar kuu yeelan doonaan.
1 Soo-saarista amphibians-ka
2 Xayawaanada Ambiya, maxay yihiin?
3 Noocyada amphibians-ka
4 Sifooyinka Amphibian
5 Tusaalooyinka amphibians-ka
5.3 Toad guud (Bufo bufo)
5.4 Raha Vermilion (Rana temporaria)
Noqoshada jilicsan, dhalmada amphibians-ka waa ukunta. Xamaarato iyo naasleyda waxay ka soo baxaan bacrinta gudaha (dheddigga dhexdeeda) halka kuwa ambiibiyiinta ku dhaqma bacrinta dibedda.
La Bacriminta amphibian waxay ku dhacdaa biyo macaan, maxaa yeelay biyaha noocan ah waxay noqonayaan midka ilaaliya ukunta inta ay socdaan waxayna u ogolaataa dadka amphibians-ka ah inaysan u baahnayn lifaaqyo embriyaha ah, sida sacabka amniotic ama allantois, sidaa darteed qaar ka mid ah astaamaha ka duwan kuwa kale ee qufaca leh.
Bacriminta jirka dibedda waxay la socotaa habdhaqan dabeecad: labku wuxuu hayaa dheddigga, oo beedka dhigaya. Markay kuwani soo baxaan, lab baa taga shahwada iyaga oo ku daadinaya iyaga oo bacriminaya. Ukuntu waxay ku sii jirtaa biyaha xadhkaha samaynaya ama ku xidhan dhirta biyaha ku jirta. Dirxiga biyaha leh ayaa mar kale iyaga ka soo baxa.
Labadaba kalluunka iyo amphibians-ka, oo bacrinta dibedda ay ku badan tahay, ukunta waxay leedahay dabool khafiif ah, maadaama shahwada ay tahay inay ka gudubto si markaa bacrimintu u dhacdo. Sababtaas awgeed, ukuntaan waa in lagu rido biyaha isku dhagan, sameysmaya kooxo isu-eg.
Amphibians-ku waxay ku dhashaan a dirxiga biyaha ku dhex dhaqaaqa dabada wuxuuna ku neefsadaa qulqulka. Marka dirxiga, oo loo yaqaan 'tadpole', uu u koray si ku filan, wuxuu maraa habsami u socod wadarta metamorphosis. Marka laga reebo noocyo dhowr ah oo rahyo roobeed ah, astaamahan ayaa aakhirka baaba'aya waxaana lagu beddeli doonaa sambabada iyo lugaha markay tadluhu sii weynaanayaan.
Fasalkan amphibianka laf dhabarta ah ayaa ka kooban rahyo, toas, salaamanders iyo biyo-biyoodka. Ambiibiyiintaani waxay awood u leeyihiin inay ku noolaadaan biyaha gudahooda iyo dibaddaba, in kasta oo ay u baahan yihiin inay si joogto ah u qoyaan maadaama ay tahay habka ay ku neefsadaan.
Xayawaanada Ambiya, maxay yihiin?
Laatiin ahaan erayga amphibian wuxuu leeyahay macno gaar ah, macno ahaan waxaa loola jeedaa "laba nolol". Tanina waa wax caan ku ah xayawaankan, oo awood u leh inay la qabsadaan oo ay ku fuliyaan shaqooyinkooda bayoolojiga ah laba nidaam deegaan: dusha sare ee dhulka iyo aagagga biyaha. Si kastaba ha noqotee, waxaan ku sii dhex milmaynaa macnaha amphibian.
Amphibians-ku waa qeyb ka mid ah qoyskaas ballaaran ee nool ee lagu tilmaamay inay yihiin laf-dhabarta (waxay leeyihiin lafo, taasi waa, qalfoof gudaha ah) anamniotes (Uurjiifkaagu wuxuu isu beddelaa afar baqshadood oo kala duwan: chorion, allantois, amnion, iyo yolk sac, oo abuuraya jawi biyo leh oo ay ku neefsan karto kuna quudin karto), tetrapods (waxay leeyihiin afar addin, ambalaas ama wax isdaba marin) iyo kulkulul (Waxay leeyihiin heer kulka jirka oo is bedbeddela).
Waxay leeyihiin muddo la yiraahdo metamorphosis (Isbadal lagu sameeyo xayawaanka qaarkood inta lagu gudajiro marxaladda horumarka bayoolojiga taas oo saameyn ku yeelata qaabdhismeedkooda iyo shaqooyinkooda iyo qaab nololeedkooda) Isbedelada ugu caansan ee soo maray waxaa ka mid ah marinka ka soo baxa gillka (cusub) ilaa sambabaha (dadka waaweyn).
Qoyskan weyn ee amphibiansku ka kooban yahay, waxaan ku sameyn karnaa kala-saarid yar oo ku saleysan seddex amar: anurans, caudates o urodles y apodal o jimicsi.
ka anurans Waa noocyo ambiibiyiin ah oo ay ku midoobeen dhammaan kuwa ambiibiyiinta ah ee aan caan ku nahay inaan u naqaanno rah iyo toori. Ka taxaddar, raha iyo toorku isku nooc ma aha. Waxaa lagu soo ururiyey iskuna ekaanshaha qaabdhismeedkooda iyo hab-dhaqankooda.
ka urodles Iyagu waa noocyo kale oo amphibians ah waxay ku kala duwan yihiin iyagoo leh dabo dheer iyo jirrid dheer. Indhahoodu si xad-dhaaf ah uma horumarin oo waxaa qariya maqaar wanaagsan. Halkan waxaan ka helnaa cusbooneysiinta, salaamyada, borotiinka iyo meeriska.
Ugu dambeyntii, waxaa jira noocyada ambiibiyiinta apodal, kuwaas oo ah kuwa ugu caansan dhammaan sababo la xiriira muuqaalkooda. Waxay aad ugu egyihiin dixiriga ama ubax dixiriirta maxaa yeelay wax addim ah ma lahan jirkooduna waa iska dheereynayaa.
Sidii aan horeyba u sheegnay, amphibians-ku waa xayawaan vertebrate, waxayna leeyihiin "mudnaanta" inay ahaadaan ka hooseeya xayawaankan fasalka ah ee ku nool meeraha Dunida. Waxaa la sheegaa inay jireen qiyaastii 300 milyan oo sano, ku dhowaad waxba!
Waxay leeyihiin afar addin: laba hore iyo laba gadaal. Lugahaasi waxaa lagu yaqaan magaca cajiibka ah ee qurido. Quiridus waxaa lagu gartaa inuu leeyahay qaab qaabeed u eg gacanta qofka, oo leh afar farood lugaha hore, shanna dhabarka. Dad badan oo ambiibiyiin ah ayaa iyaguna leh shanaad dabada u eg addinka.
Ahaanshaha noole ka mid ah dhiig qabow, heerkulka jirkoodu wuxuu ku xiran yahay, wax badanna, deegaanka ay ku sugan yihiin, maadaama aysan xakamayn karin kuleylka gudaha. Tani waa mid ka mid ah sababaha xoog ku darsiga taasoo u horseeday inay la qabsadaan nolosha biyaha iyo dhulka. Labadan nidaam waxay kaa caawinayaan inaad iska ilaaliso kuleylka ama qaboojinta jirkaaga.
uu jilicsansida ay ugxanta uga bexeyso. Haweeneyda ayaa mas'uul ka ah dhigista ukumadan waxayna had iyo jeer ku sameysaa jawiga biyaha, sidaa darteed tijaabooyinka dhalinyarada waxay leeyihiin habdhis neefsasho oo leh miisaan.
Maqaarka noolahaasi waa la arki karo, inaad awoodo inaad ka gudubto maadooyin kala duwan, gaasas iyo waxyaabo kale. Noocyada qaar ayaa awood u leh inay walxaha sunta ah ku qariyaan maqaarkooda iyagoo ah nidaam difaac oo ka dhan ah khataraha dibadda.
Xitaa diiradda maqaarkaaga, waa in la ogaadaa in tani ay tahay qoyan oo xaaluf leh, oo ka duwan noocyada kale ee xoolaha ee xambaara. Xaaladdaani waxay u oggolaaneysaa iyaga inay si habboon u soo nuugaan biyaha iyo, sidaas awgeed, oksijiin. Taas bedelkeeda, waxay ka dhigeysaa iyaga kuwo aad ugu nugul howlaha Fuuqbax. Haddii amphibian-ka uu ku jiro jawi qoyaan hooseeya, maqaarkiisa dhaqso ayuu u qalalayaa, taas oo u horseedi karta dhibaatooyin daran iyo xitaa dhimasho.
Xayawaankani waxay leeyihiin habdhiska wareegga dhiigga oo qaybtiisa ugu weyni tahay a wadnaha saddex geesoodka ah oo ka kooban laba atria iyo ventricle. Wareegeedu wuu xidhan yahay, labalaab yahay oo aan dhammaystirnayn.
Indhuhu badanaa waa kuwo waaweyn oo, halkii, wey weynaadaan, taas oo sahleysa a aragti ballaaran aad ugu habboon marka la ugaarsanayo wax ugaadhsad Waxaa jira waxyaabo ka reeban sida kuwa cusub.
In kasta oo aysan u ekaan karin, amphibians waxay leeyihiin ilko, in kastoo kuwani naadir yihiin. Shaqadeedu waa inay ka caawiso haynta cuntada. Carabku sidoo kale wuxuu noqdaa aalad ku habboon in lagu soo qabto xayawaannada kale ee yaryar. Waxay soo bandhigaan a caloosha qaabeeya tubular, oo leh mindhicir weyn oo gaaban, laba kelyood, iyo kaadi haysta kaadi haysta.
Waqtigan xaadirka ah, waxaa jira liis garayn qaar ka mid ah 3.500 nooc oo amphibians ah. Si kastaba ha noqotee, saynisyahannadu, qiyaastooda, waxay saadaalinayaan in wadarta tirada ay noqon karto hareeraha 6.400.
Markii aan ka fekereyno amphibians, sawirka raha ama toad had iyo jeer wuxuu ka muuqdaa madaxyadeena, laakiin sidoo kale waxaan leenahay xayawaano kale sida cusbo iyo salaam.
Kuwani waa tusaalooyin yar oo amphibians ah, in kastoo, dabcan, ay jiraan inbadan oo kale:
Noocan ah salamander waxaa sidoo kale loo yaqaan axolotl ama purepecha achoque. Waa nooc noocee ah, oo ah, inuu ku jiro oo keliya meel cayiman. Xaaladdan oo kale, waxay ku nooshahay oo keliya Zagoapu Lagoon, oo ku taal gobolka Michoacán (Mexico).
Badanaa waxaa lagu gartaa iyadoo leh jir dhumuc yar, dabada gaaban iyo gilgisyada. Midabkeeda liinta ama casaanka ah, oo lagu daro dhibcihiisa madow ee ku fidsan dhammaan dusha jidhkiisa oo dhan, ayaa ka dhigaya inaan la dareemin.
Xayawaankani wuxuu badanaa ku yaal dhulka Yurub, gaar ahaan waqooyiga Spain iyo bariga Faransiiska. Waxay leedahay midab cagaaran oo ay weheliso midabbo cagaar ah oo aad u muuqda. Intaas waxaa sii dheer, dhabarkiisa waxaa isku tallaabay xariiq aad u qaas ah oo casaan casaan ah.
Toad guud (Bufo bufo)
Aad bay u badan tahay in laga helo ku dhowaad dhammaan qaaradda Yurub iyo qayb ka mid ah Aasiya. Waxay doorbideysaa deegaanno ka kooban biyo fadhiisiya, meelaha waraabka, iwm. Laga yaabee, inaad u adkeysato xaaladaha nololeed ee biyaha nadaafad darada ah waxay ka dhigtay mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan. Ma laha midabyo dhalaalaya, laakiin taa beddelkeeda maqaarkeedu waa midab "bunni ah", oo ay ku daboolan yihiin dhowr kuus oo ah qaab burooyin ah.
Raha Vermilion (Rana temporaria)
Sida qaraabadiisa kor ku xusan, amphibian-kan ayaa sidoo kale hoy ka dhigtay Yurub iyo Aasiya. In kasta oo ay doorbiddo meelaha qoyan, rahaani waqtigiisa intiisa badan wuxuu ku qaataa biyaha. Kama tirsana qaab midab go'an, laakiin shaqsi kastaa wuu soo bandhigi karaa midabbo kala duwan. Iyadoo ay taasi jirto, maqaarka midabka leh ee leh dhibco yaryar ayaa u badan inuu badsado. Sanka fiiqan waa mid ka mid ah astaamaha lagu garto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Kalluunka » kuwa kale » Amphibians » Amphibians
Cunnada kalluunka lagu sameeyo